Maitiro ekuyera mwero weropa oxygen neApple Tarisa | Ndinobva mac
Maitiro ekuyera huwandu hweropa oxygen neApple Watch
Pakupedzisira iyo Apple Watch ikozvino inogona kuyera iyo nhanho okisijeni muropa. Isu taifanira kumirira kusvikira nhevedzano 6 yaburitswa nezuro masikati kuti tikwanise kuve nebasa iri. Zvakawanda zvainge zvataurwa pamusoro pekuti shanduro dzekare dzeApple's smartwatch dzaigona kutoita chiyero chakadai.
Uye zvimwe kana tichifunga kuti chero makumi mana Euro Euro yemoyo yekutarisisa yekutarisa iyo yatinowana kuAmazon kana yakachipa kwazvo paAliexpress, zvakare iri oximeter mukuwedzera kuyera moyo wako. Icho chokwadi ndechekuti pakupedzisira nyowani Nhepfenyuro dzeApple 6 inosanganisira inzwa yekumashure nyowani yeichi chinangwa. Ngatione kuti zvinoshanda sei.
Huru hutsva hweApple Watch Series 6 hapana mubvunzo kugona kuyera mwero weokisijeni muropa remushandisi. Chinhu chitsva chinogona kuve nebhenefiti chaiyo uye kukwanisa kuita munguva kana iwe ukaratidza akachinja O2 mazinga kana iwe uchirwara nezvirwere zvakaita sekushaya moyo, asima kana coronavirus.
1 Maitiro ayo Apple Watch kuyera oxygen mazinga
2 Oxygen mazinga muropa
3 Zvinodiwa zvinodiwa
4 Maitiro ekuyera ropa okisijeni neApple Watch
5 Maitiro ekugadzira otomatiki zviyero
6 Dzimwe zviyero zvinogona kunge zvisina kunyatsoita
Maitiro ayo Apple Watch kuyera oxygen mazinga
Kuita kuti zviyero zve okisijeni zviitike, Apple yakachinja kurongeka kwema sensors kumashure kweApple Watch muChikamu 6. Zvino, mukuwedzera kune maGreen uye infrared maLED, pane Akatsvuka maLED yekuwedzera uye mamwe matsva mafotoodhiodhi.
Oxygen yekuyera musimboti yakafanana kana yakafanana neyeye pulse kuyera: iwo mana ma LED mapoka anovhenekera iri pasi peganda nemidziyo, uye nekudaro iyo mapikicha ivo vanorekodha kumashure kwakaratidzira mwenje uye vanogona kushandisa algorithms kuverenga huwandu hwe oxygen iyo masero matsvuku eropa ari kutakura mumuviri parizvino.
Uku kuverenga kunoenderana neruzivo rwekuti zvakadii yakawanda okisijeni inosunga kumasero matsvuku eropa, redder ropa rinoonekwa. Iprotein inokonzeresa kusunga oksijeni, hemoglobin, ine simbi ine zvivakwa zvinogona kusunga kune mamorekuru eoksijeni. Mushure mekujoinha, iyo kara inoshanduka kubva kune yakasviba tsvuku kuenda kune tsvuku tsvuku, shanduko iyi inogona kutorwa nemaphoto diode eApple Watch.
Iyi nzira haina kutangwa neApple kure nayo. Pave nemakore akawanda kubva ipapo oximeter yezvipatara anoshandisa ino. Ndiyo chaiyo kiringi inoiswa pamuromo wechigunwe kuyera kupomba, uye panguva imwechete iyo oxygen mwero muropa.
Zvinodikanwa kushandiswa yekuwedzera pane iyo Apple Tarisa kuyerwa. Ichi chishandiso chinotungamira mushandisi kuburikidza nechiyero uye inoratidza yakayerwa data. Ruzivo urwu rwunowedzerwawo kuapp yehutano mune itsva Ropa Oxygen tebhu.
Oxygen mazinga muropa
Sekureva kwaApple, danho rakaringana rinoratidzwa rinofanira kunge riri pakati pe99 ne95 muzana.
Sekureva kwaApple, zvakajairika kuzadza okisijeni muropa kunofanirwa kuve 95 kusvika 99 muzana, asi kune vamwe vanhu muganhu uyu wakaderera zvishoma. Kunyangwe panguva yekurara, kuzadza kunogona kudonha pazasi pe95 muzana muganho.
Kugona kutaura kuti yakawanda sei oxygen iri muropa ine zvakakosha zvirevo zvezvokurapa, sezvo zvaigona kubatsira kuziva a kutadza kwemoyo, apo moyo usingakwanise kupomba ropa rakaringana kuti usvike mumuviri wese, sekuparipartum cardiomyopathy (PPCM). Inogona zvakare kukwanisa kuyambira nezvechirwere cheasima, uye inogona kutaura kana uri kusangana nematambudziko ekufema ane hukama neCOVID-19, semuenzaniso.
Zviripachena, iwe unoda iyo Apple Watch Series 6, nekuti ndiyo yega Apple Watch inokwanisa kuyera oxygen muropa. Tichafanira kunge tichimhanya WatchOS 7 uye iyo paired iPhone inofanira kunge yakaiswa iOS 14.
Apple yakaratidza kuti kuyerwa kweokisijeni kunongova chete inowanikwa mune dzimwe nyika, asi haisati yasimbisa kuti ndedzipi nyika dzichava neapp iyo inokwanisa kuyera ropa oxygen. Apple payakaburitsa Apple Watch Series 4 ine hunyanzvi hwekutora ECG, chimiro chakadai hachina kuwanikwa munyika zhinji dzekutanga, nekuda kwenyaya dzezvekurapa munyika dzese.
Kufanana neiyo ECG app, iyo oxygen app inongogoneswa kune vashandisi anopfuura makore makumi mashanu. Mushandisi anofanirawo kunge ari 18 kana mukuru kuti agovane data reApple Watch neye iPhone yemhuri.
Maitiro ekuyera ropa okisijeni neApple Watch
Usati watora danho rekutanga, unofanirwa kugadzirisa iko kunyorera.
Vhura iyo application Utano pane iyo iPhone.
Dzvanya pane iyo tebhu Ongorora.
Sarudza Oxygen saturation uye ita kuti iite.
Kuona kuti iko kushanda kunoshanda zvakavimbika, Apple inokurudzira kutora chiyero ichi wakagara.
Paunenge uchitora chiyero, iwe unofanirwa kugara zvakadaro. Wachi yacho inofanirwa kuve yakasungirirwa pachiringi uye kwete kuzununguswa. Chiyero chinotora masekondi gumi neshanu, mushure mezvo chinopa chikamu cheiyo okisijeni iri muropa.
Maitiro ekugadzira otomatiki zviyero
Wachi inogona kuyera oxygen iri muropa mu automatica, kunyangwe pasina kuvhurwa kwekushandisa. Kuti Apple Tarisa kuyera iwe uchirara, unofanirwa kumisikidza chirongwa chekurara muHutano app.
Mhedzisiro yezviyero zve otomatiki zvinogona kutariswa muapp Utano munzvimbo yekufema. Sezvo mwenje mutsvuku uchigona kunetsa murima, iyo app inokutendera kuti udzivise zviyero zvakadaro. Iwe unogona kugonesa theatre mode, semuenzaniso.
Dzimwe zviyero zvinogona kunge zvisina kunyatsoita
Kana kurova kwemoyo kuchimhanya, (Kurova zana paminiti kana zvimwe), iyo oxygen level haigoni kuyerwa nenzira kwayo Rimwe dambudziko raizove kana paine nyora pachiwoko panotariswa ma sensors. Iyo inogona zvakare kuve chikonzero chesavimbika zviyero. Mimwe mhando uye mavara ematato anokwanisa kuvhara zvachose mwenje kubva kuma sensors uye ipapo kuyerwa kwaisazogoneka.
Kana iwe uine tsika yekuve ne tembiricha yemuviri yakaderera pane zvakajairwa, hunhu hwekuyerera kweropa mukuchinja kweganda, izvo zvakare zvinopa zvisizvo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuyera huwandu hweropa oxygen neApple Watch
Iyo nyowani Apple Watch Series 6 inosanganisira iyo U1 chip